Ku wareeji wershadaha si ay u soo saaraan giraangiraha hagaha naylo tayo sare leh |
Ku wareeji wershadaha si ay u soo saaraan giraangiraha hagaha naaska leh ee tayo sare leh
Giraangiraha hagaha loo yaqaan 'nylon guide' ayaa loo adeegsadaa in lagu jiheeyo jihada walxaha jilicsan ee toosan sida dhuumaha jilicsan, fiilooyinka birta ah iyo xargaha naylonka inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa. Giraangiraha haggu wuxuu leeyahay qaab dhismeedka ciyaarta, giraangiraha hagaha wuxuu ka ciyaari doonaa door badbaadinta shaqaalaha mashaariicda qaarkood ama wax soo saarka.
Magaca Product: giraangiraha naasaha naylon Processing: duritaanka / Centrifugal shubay / CNC Processing
Cabbirka: loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida,
1. Is saliid-la'aan saliid ah, ilaali xarigga siligga birta ah.
2. Is caabbinta wanaagsan, cimri dherer iyo culeys fudud
Cadaadiska caadiga ah, walxaha ceeriinka ah ee la dhalaaliyay ee loo yaqaan 'caprolactam monomer C6H11NO' ayaa laga sameeyay maadada alkaline-ka oo ah soo-saare, oo ay weheliyaan hawl-wade iyo wakiilo kale oo gacan-yare ah si loo sameeyo monomer-ka inuu polymerized yahay, isla markaana si toos ah loogu durayo caaryada kuleylka leh ee heer kulka qaarkood Maaddada Fal-celinta polymerization-ka ayaa si dhakhso ah loogu fuliyaa caaryada, oo lagu soo koobaa meel adag oo adag, ka dibna lagu sii mariyo habka ku habboon si loo helo badeecada horay loo sii cayimay. Maaddaama uu yahay mid ka mid ah caagagga injineernimada, nylon MC wuxuu "ku beddelaa birta balaastik wuxuuna leeyahay waxqabad aad u fiican" waana mid aad u badan. Waxay leedahay waxyaabo badan oo u gaar ah sida culeyska fudud, xoog sare, is saliidaynta, xirashada iska caabinta, ka hortagga daxalka iyo dahaadhka.
(1) Adkaysi wanaagsan, oo awood u leh qalloocinta iyada oo aan la beddelin, iyada oo la ilaalinayo adkaanta iyo iska caabinta saameynta soo noqnoqda;
(2) Is-saliid-u-adkaysi u xirashada, siinta waxqabad ka wanaagsan kan birta ah ee birta birta birta ah iyo laydhka fenolik ee dalabyada saliid-la’aanta ah (ama saliidda laga soo saaray), yaraynta isticmaalka iyo keydinta tamarta;
(3) Marka la barbardhigo birta, MC nylon wuxuu leeyahay adkaansho hoose mana dhaawici doono qaybaha aargudashada.
Xiga: Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan ee wiishka naylon tayo sare leh qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay
Giraangiraha nayliinka qaada
Giraangiraha duudduuban ee nylon
Giraangiraha hagaha naaska yar
Giraangiraha nylon yaryar
Giraangiraha nylon yar yar oo sita sita